မေးမြန်းလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ -, Ltd. Huizhou Zhongxin Lighting ကုမ္ပဏီ
ဆွဲထားသည့် LED လက်ဖက်ရည်အလင်း Holder
အလှဆင် Umbrella အလင်းများ
MM စာလုံးကြီးနှင့်အတူ SMD SL LED
နွေဦးရာသီ & နွေရာသီ
စပျစ်ပင် String အလင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများထောက်ပံ့ရေးနှင့်အခြားစျေးကွက်အချက်များပေါ်တွင် မူတည်. ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ သင့်ကုမ္ပဏီနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ပြီးနောက်ငါတို့သည်သင်တို့မွမ်းမံထားတဲ့စျေးနှုန်းစာရင်းပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
DA ER ကျေးရွာ, XIAOJINKOU Town, HUICHENG ခရိုင်, Huizhou CITY, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ် 516023
© Copyright - 2010-2017 : All Rights Reserved. လမ်းညွှန် ,Hot ထုတ်ကုန်များ ,မြေပုံအညွှန်း ,amp မိုဘိုင်း
အလှဆင်ဖုံး့ String အလင်းများ , ဆန်စက္ကူဖုံး့ String အလင်းများ , Edison Bulb String Lights, ဝါးဖုံးနှင့်အတူ String အလင်းများ , သစ်သား Craft ဖုံး့ String အလင်းများ , အလှဆင်အထည်အလိပ့် String အလင်းများမျက်နှာဖုံးများ ,